Komiti yekodzero dzevana yeUN yekuongorora Argentina, Angola, Algeria, Montenegro, Russia, Lesotho neNorway
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Komiti yekodzero dzevana yeUN yekuongorora Argentina, Angola, Algeria, Montenegro, Russia, Lesotho neNorway
Algeria Kuputsa Nhau • Angola Breaking News • Argentina Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Lesotho Breaking News • Montenegro Kupwanya Nhau • nhau • Norway Kuputsa Nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Komiti yeUN yekodzero dzeMwana ichasangana kuGeneva kubva Chivabvu 14 kusvika Chikumi 1, 2018 kuti iongorore kodzero dzevana munyika dzinotevera: Argentina, Angola, Algeria, Montenegro, Russian Federation, Lesotho neNorway.
Komiti, iyo inoumbwa nevanozvimirira gumi nemasere, inoongorora mashandiro anoita Nyika dzakabvumirana Chibvumirano cheKodzero dzeVana (CRC) kutevedzera zvisungo zvavo. Argentina, Angola, Montenegro, Lesotho neNorway zvichaongororwa pasi pegungano iri.
Komiti ichaongorora zvakare kutevedzera kweAngola neRussian Federation kuOptional Protocol pakutengeswa kwevana, chipfambi chevana uye zvinonyadzisira zvevana (OPSC). Ichadzokororazve kutevedzera kweAngola neAlgeria kuOptional Protocol yekubatanidzwa kwevana muhondo yezvombo (OPAC).
Nyika dzakabatana kuConferensi uye / kana ayo maviri ekutanga maOptional Protocols anofanirwa kuendesa yakagara yakanyorwa mishumo kuKomiti. Panguva yemisangano kuGeneva, nhengo dzeKomiti dzinobata zvikamu zvemibvunzo nemhinduro nenhumwa dzakasiyana dzehurumende. Komiti inoisa ongororo yayo pamushumo webato reHurumende uye mhinduro dzakanyorwa kuRCR runyorwa rwezvinhu, mhinduro dzevamiriri uye neruzivo kubva kune mamwe masangano eUN nemaNGO.
CRC ichaburitsa zvayakawana, inozivikanwa sekupedzisa kucherechedzwa neChitatu, Chikumi 6 2018. Musangano wenhau wekuburitsa zvakawanikwa wakarongerwa nguva dza12: 30 zuva rimwe chetero muPress Room 1 kuPalais des Nations kuGeneva.